Inkampani yethu-iQela le-Ezong
Iqela le-Ezong lasekwa okokuqala ngo-1996. Ikomkhulu lenkampani likwidolophu yaseDali, kwiSithili saseNanhai, kwisiXeko saseFoshan. Ubungcali kushishino lwegumbi lokucoca iminyaka eyi-26, i-Ezong iye yaba lishishini eliphambili le-aluminium ecocekileyo kunye neengcango ezicocekileyo kunye neWindows eTshayina.
Iqela le-Ezong linamasebe amathandathu kunye neziseko zokuvelisa, kuquka i-Guangzhou Yizhong, isiseko sokuvelisa iSanshui kunye neNanhai Clean Door Business Unit njalo njalo. Imveliso igubungela indawo engaphezulu kwe-30,000 yeemitha zesikwere kwaye ixabiso lemveliso yonyaka lifikelela kwi-800 yezigidi zeeyuan. Ezongikwasisiqinisekiso sesizwe samashishini obuchwepheshe obuphezulu kunye neshishini elithembekileyo, elinamalungelo awodwa abenzi anxulumeneyo angaphezu kwama-45.
I-Doorhospital.com yeyeqela le-Ezong.
Iphupha uYizhong labona amathuba eshishini lamaxesha kwaye laqala ukusebenza ngeeprofayili ze-tuyere aluminiyam eGuangzhou, eyaqala ukumila.